ဖားကန့် မှာ ဥပဒေ ကို လက်တစ်လုံး ခြားလုပ်ပြီး သတ္တု ဘယ်လိုတွေ တူးဖော်ကြ သလဲဆိုတာ သိဲကြလား? – Zartiman
အဲဒီလို လက်တလုံးခြားလုပ်တဲ့ အကျိုးဆက်က အခုလို လူတွေအများကြီး တစ်ပြိုင် တည်းသေဆုံး ရတဲ့အထိဖြစ်လာ တာပါ ။ ဒါဟာ ပထမအကြိမ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတိုင်းခွင့်ပြုထားရင် နောင်လည်း ထပ်သေနေအုံးမှာပါ။ ဥပဒေအထက်က လက်တစ်လုံးခြားလုပ် တဲ့ ငြင်ဆိုးစနစ်ဆိုးတစ်ခုကြောင့် အခုလိုအများကြီး တပြိုင် တည်းသေကြ ရတာပါ ။အဲဒီစနစ်ဆိုး ကို မဖျက်ပဲခွင့်ပြုထား သမျှ သတ္တုတွင်း ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးလို့ခေါ် တဲ့ Mine Safety ကို အကောင်အထည်ဖေါ်လို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
မှားယွင်နေတဲ့ စနစ်ကိုအရင်ပြင်ရ ပါမယ် ။ အဖြစ်မှန်ကို သိရှိနိုင်ကြ ပါစေ။ သိရှိပြီးရင်လည်းပြင်ရဲတဲ့ သတ္တိရှိကြ ပါစေ။ ဖားကန့် မှာ ဥပေ ဒကို လက် တစ်လုံးခြား လုပ်ပြီး သတ္တု တူးဖော်ကြ ပုံ…က ဒီလိုပါ။ ကျောက်မျက်လုပ်ကွ က်တစ်ခု ရဲ့ ခွင့်ပြု ဧရိယာ ဟာ အများဆုံး(၅) ဧက သာရှိ ပါ တယ် ။ စက်ကြီးတွေ ကားကြီးတွေ သုံးစွဲမရနို င်တဲ့ အကျယ် အဝန်းပါ ။ တမင် ကန့်သတ်ထားတာပါ။ အလတ်စားလုပ်ကွက် အ ဆင့်ပဲ ခွင့်ပြု ပါတယ် ။ ဒါက ဥပဒေမှာ ပါတာပါ ။
အခု (၅)ဧကတွေ ပေါင်းပြီး တူးခဲ့ကြတာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခု မကတော့ ပါဘူး။ ဥပဒေ အထက် မှာ ဘယ်သူမှ မရှိရ ဆိုပြီးပြောခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥပဒေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး (၅)ဧကသာ ခွင့်ပြုထားတဲ့ လုပ်ကွက်တွေပေါင်း ပြစ်ကြတယ်။ စက်ကြီးတွေ ကားကြီးတွေ သုံးမ ရ အောင် မြေအကျယ် ( ၅ ) ဧကသာပေးတာ ကို အခုလို လုပ် လိုက်တော့ စက်ကြီးကားကြီးတွေ သုံးလို့ ရသွား တယ် ။ စက်ကြီးကားကြီး တွေ ကိုသာ သုံးပြီး သတ္တုတွင်း တူးဖေါ်ဖို့ ဘာဒီဇိုင်း မှ မရှိဘဲ ကျောက်ရပြီးရောဆိုပြီး တူးချင်သလိုတူးခဲ့ကြ တယ် ။
သတ္တုတွင်းဒီဇိုင်း ဆိုတာ သတ္တုတူးတာ စနစ်ကျဖို့တစ်ခုသာမက ပါဘူး ။ သတ္တုတွင်း ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး နဲ့ ကျန်းမာရေး ကိစ္စ တွေပါ ပါပါတယ်။ကျောက်မျက် ဧရိယာတွေ မှာ အကြီးစားမပေး ဘဲ အလတ်စား အဆင့် နဲ (၅) ဧက အကျယ်သာပေး တာပါ ။ ဒါကို လက် တစ်လုံးကြားလုပ်ပြီး အကြီးစားတူး ခဲ့ကြရာက ဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့ မြေစာပုံတွေ လုပ်ကွက်တွေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေမဲ့စွန့် ပြစ်မှုတွေ ပေါ်လာ ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဖားကနျ့ မှာ ဥပဒေ ကို လကျတဈလုံး ခွားလုပျပွီး သတ်တု ဘယျလိုတှေ တူးဖျောကွ သလဲဆိုတာ သိဲကွလား?
အဲဒီလို လကျတလုံးခွားလုပျတဲ့ အကြိုးဆကျက အခုလို လူတှအေမြားကွီး တဈပွိုငျ တညျးသဆေုံး ရတဲ့အထိဖွဈလာ တာပါ ။ ဒါဟာ ပထမအကွိမျ မဟုတျပါဘူး။ ဒီအတိုငျးခှငျ့ပွုထားရငျ နောငျလညျး ထပျသနေအေုံးမှာပါ။ ဥပဒအေထကျက လကျတဈလုံးခွားလုပျ တဲ့ ငွငျဆိုးစနဈဆိုးတဈခုကွောငျ့ အခုလိုအမြားကွီး တပွိုငျ တညျးသကွေ ရတာပါ ။အဲဒီစနဈဆိုး ကို မဖကျြပဲခှငျ့ပွုထား သမြှ သတ်တုတှငျး ဘေးအန်တရာယျ ကငျးရှငျးရေးလို့ချေါ တဲ့ Mine Safety ကို အကောငျအထညျဖျေါလို့ ရမှာ မဟုတျပါဘူး ။
မှားယှငျနတေဲ့ စနဈကိုအရငျပွငျရ ပါမယျ ။ အဖွဈမှနျကို သိရှိနိုငျကွ ပါစေ။ သိရှိပွီးရငျလညျးပွငျရဲတဲ့ သတ်တိရှိကွ ပါစေ။ ဖားကနျ့ မှာ ဥပေ ဒကို လကျ တဈလုံးခွား လုပျပွီး သတ်တု တူးဖျောကွ ပုံ…က ဒီလိုပါ။ ကြောကျမကျြလုပျကှ ကျတဈခု ရဲ့ ခှငျ့ပွု ဧရိယာ ဟာ အမြားဆုံး(၅) ဧက သာရှိ ပါ တယျ ။ စကျကွီးတှေ ကားကွီးတှေ သုံးစှဲမရနို ငျတဲ့ အကယျြ အဝနျးပါ ။ တမငျ ကနျ့သတျထားတာပါ။ အလတျစားလုပျကှကျ အ ဆငျ့ပဲ ခှငျ့ပွု ပါတယျ ။ ဒါက ဥပဒမှော ပါတာပါ ။
အခု (၅)ဧကတှေ ပေါငျးပွီး တူးခဲ့ကွတာ ဆယျစုနှဈ နှဈခု မကတော့ ပါဘူး။ ဥပဒေ အထကျ မှာ ဘယျသူမှ မရှိရ ဆိုပွီးပွောခဲ့ကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဥပဒကေို မကျြကှယျပွုပွီး (၅)ဧကသာ ခှငျ့ပွုထားတဲ့ လုပျကှကျတှပေေါငျး ပွဈကွတယျ။ စကျကွီးတှေ ကားကွီးတှေ သုံးမ ရ အောငျ မွအေကယျြ ( ၅ ) ဧကသာပေးတာ ကို အခုလို လုပျ လိုကျတော့ စကျကွီးကားကွီးတှေ သုံးလို့ ရသှား တယျ ။ စကျကွီးကားကွီး တှေ ကိုသာ သုံးပွီး သတ်တုတှငျး တူးဖျေါဖို့ ဘာဒီဇိုငျး မှ မရှိဘဲ ကြောကျရပွီးရောဆိုပွီး တူးခငျြသလိုတူးခဲ့ကွ တယျ ။
သတ်တုတှငျးဒီဇိုငျး ဆိုတာ သတ်တုတူးတာ စနဈကဖြို့တဈခုသာမက ပါဘူး ။ သတ်တုတှငျး ဘေးအန်တရာယျကငျးရှငျးရေး နဲ့ ကနျြးမာရေး ကိစ်စ တှပေါ ပါပါတယျ။ကြောကျမကျြ ဧရိယာတှေ မှာ အကွီးစားမပေး ဘဲ အလတျစား အဆငျ့ နဲ (၅) ဧက အကယျြသာပေး တာပါ ။ ဒါကို လကျ တဈလုံးကွားလုပျပွီး အကွီးစားတူး ခဲ့ကွရာက ဘေးအန်တရာယျရှိတဲ့ မွစောပုံတှေ လုပျကှကျတှေ၊ သဘာဝပတျဝနျးကငျြကို ထိခိုကျစမေဲ့စှနျ့ ပွဈမှုတှေ ပျေါလာ ရတာ ဖွဈပါတယျ ။